Update on Middle School Transformation Bond Measure | Battle Creek Public Schools
Dec 14, 2020 | District, Northwestern Middle School, Springfield Middle School
At this evening’s board meeting, the BCPS school board voted to move forward with the next steps forabond measure to transform Northwestern Middle School intoaK-8 visual and performing arts academy and make building renovations to Springfield Middle School. This means that the bond proposal will be submitted to the Michigan Department of Treasury in January so that the measure can appear on the ballot forapublic vote in May 2021.
We began sharing information about this projectafew weeks ago and we have had amazing feedback from the community! Parents and community members are excited to see the district continue to expand opportunities for students to explore their curiosity, interests, and talents.
If you missed the recent town hall event held on Facebook Live or would like to watch it again to learn more about the proposed plan, click here to view the video or click here to download the presentation. Translated versions of the presentation are also available here in Spanish and here in Burmese.
As the process moves ahead we are especially looking forward to gaining more input to help shape the project. We will be working to gain community input and student voice through surveys, focus groups, collaboration meetings, and other formats over the next few months.
If you would like to leave feedback, or if you’d like to get involved by participating in future focus groups or collaboration meetings, please complete the form at bcps.me/MSBond.
The bond measure for middle school transformation will be on the ballot in Battle Creek in May 2021!
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA MEDIDA DEL PRÉSTAMO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA
En la reunión de la junta de esta noche, la junta escolar de BCPS votóafavor de seguir adelante con los próximos pasos para una medida de préstamo para transformar la escuela intermedia Northwestern en una academia de artes visuales y escénicas para grados K-8 y hacer renovaciones en el edificio de la escuela intermedia Springfield. Esto significa que la propuesta del préstamo se presentará al Departamento del Tesoro de Michigan en enero para que la medida pueda aparecer en la boleta electoral para una votación pública en mayo de 2021.
¡Comenzamosacompartir información sobre este proyecto hace unas semanas y hemos recibido comentarios increíbles de la comunidad! Los padres y miembros de la comunidad están emocionados de ver que el distrito continúa ampliando las oportunidades para que los estudiantes exploren su curiosidad, intereses y talentos.
Si se perdió la reciente junta comunitaria en Facebook Live o le gustaría volveraverlo para obtener más información sobre el plan propuesto, haga clic aquí para ver el video o haga clic aquí para descargar la presentación. Las versiones traducidas de la presentación también están disponibles aquí en español y aquí en birmano.
A medida que avanza el proceso, estamos especialmente ansiosos por obtener más aportes para ayudaradar forma al proyecto. Trabajaremos para obtener la opinión de la comunidad y la voz de los estudiantesatravés de encuestas, grupos de enfoque, reuniones de colaboración y otros formatos durante los próximos meses.
Si desea dejar comentarios, o si desea participar en futuros grupos de enfoque o reuniones de colaboración, complete el formulario en bcps.me/MSBond
¡La medida de préstamo para la transformación de la escuela intermedia estará en la boleta electoral en Battle Creek en mayo de 2021!
အလယ်တန်းကျောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် ချေးငွေစာချုပ်တိုင်းတာခြင်း နှင့် ပတ်သက် သော နောက်ဆုံးရသတင်း။
ဒီနေ့ညနေပိုင်းတွင် ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ BCPS ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့များသည်
Northwestern အလယ်တန်းကျောင်းကို သူငယ်တန်း - ၈တန်း သို့ အမြင်အာရုံ နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာအကယ်ဒမီသို့၎င်း၊
Springfield အလယ်တန်းကျောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၎င်း၊ ငွေချေးစာချုပ်တိုင်းတာခြင်းတဆင့်တက်နိုင်ရန် မဲပေးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤငွေချေးစာချုပ်အဆိုပြုလွှာကို
မိချိဂန် ဘဏ္ဌာရေးဌာန သို့ ဇန္နဝါရီလ တွင်တင်ပြမှာဖြစ်ပြီး၊ မေလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လူထုများထံသို့ ဆန္ဒမဲတောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်၌ ဤစီမံကန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များ ကိုစတင် ဝေဌခဲ့ပြီး၊ ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများထံမှ အံ့ဩဖွယ်တုံ့ပြန်ချက်များ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ မိဘများ နှင့် ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များများသည် ခရိုင်မှဆက်လက်ပြီး ကျောင်းသားများ၏ သိချင်စိတ်ပြင်ပြခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှု နှင့် ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် စသည့်တို့အတွက် အကျယ်တဝန့်ရရှိစေသော အခွင့်အရေးအတွက် စိတ်လှုပ် ရှားနေမိပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် Facebook တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် town hall တွင်ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးကို ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက၊ ဤနေရာရှိ ဗီဒီယိုကို နှိပ်ပြီးပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဤနေရာတွင် တင်ဆက် ထားသော (presentation) ကို ဒေါင်းလော့စ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ပြန်ဆိုထား တာရရှိနိုင်ပြီး၊ ဤနေရာတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုထားတာရရှိနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းကိုပုံဖော်ရာတွင်အထောက်အကူများပိုမိုရရှိရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း စစ်တမ်းများ၊ အာရုံစိုက်အုပ်စုများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစည်းအဝေးများနှင့် အခြားပုံစံများမှ တစ်ဆင့်ရပ်ရွာလူထု၏ ပါ၀င်မှု နှင့် ကျောင်းသားများ ၏
အသံကိုရရှိရန် လုပ်ဆောင်သွား မှာဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုထားလိုပါက သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင်အာရုံစိုက်အုပ်စု သို့မဟုတ် အစည်းအဝေး တို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လိုပါက
ဤ အလယ်တန်းကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ချေးငွေတိုင်တာခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော ဆန္ဒမဲကောက်ယူခြင်းကို မေလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။